အဘယ်အရာကိုလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်ကွယ်လွန်လျှင်လုပ်ဖို့ | USAHello | USAHello
သငျသညျတစ်စုံတစ်ဦးကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ကွယ်လွန်သောအခါအယူဖို့လိုအပ်အဆင့်မှထွက်ရှာမည်. သငျသညျမိသားစုဝင်တစ်ဦးဦးသေဆုံးနေသောကြောင့်စွန့်ခွာချင်, ဒါမှမဟုတ်သူကအခြားတိုင်းပြည်များတွင်သေလျှင်ဘာလုပ်ထွက်ရှာမည်.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့လူအများစုဆေးရုံတစ်ခုသို့မဟုတ်သူနာပြုအိမ်တွင်သေဆုံး. တစ်စုံတစ်ဦးကကွယ်လွန်သည့်အခါသူနာပြုများနှင့်ဆရာဝန်များကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိပါလိမ့်မယ်. သူတို့ကသင့်ကိုလမ်းပြနှငျ့သငျဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ကူညီရန်မေးခွန်းများမေးပါလိမ့်မယ်. အမေရိကန်များဟုပြောစေခြင်းငှါ “သေဆုံး” သို့မဟုတ် “လွန်” အစား “သေဆုံး”. သငျသညျစကားများသုံးနိုင်ပါသည် “သေဆုံးသော” သို့မဟုတ် “ဇာထိုးပန်းထိုး” သို့မဟုတ် “အကြွင်း” သူတို့ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းပြောဆိုသည့်အခါ.
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သောကြောင့်ရောဂါအိမ်မှာသေလျှင်, သင်ကကူညီပေးဖို့ဆရာဝန်တစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဲဒီမှာဖြစ်နိုင်သည်ကဘာလဲ. သငျသညျအဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီသည်အထိသင်သည်တစုံတခုကိုလုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး. သင်မည်သည့်ဘာသာရေးအခမ်းအနားသို့မဟုတ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများအတွက်လိုအပ်သည့်အချိန်ကြာနိုင်ပါတယ်. ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များသည်သေမင်း၏တရားဝင်ကြေငြာထုတ်ပြန်နှင့်ပုံစံများကိုဖြည့်စွက်နိုင်ပါတယ်.
တစ်စုံတစ်ဦးကရုတ်တရက်ကွယ်လွန်လျှင်, သင်ဖုန်းဆက်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည် 911 တစ်ဦးအသေခံအစီရင်ခံရန်. ရဲအရာရှိသို့မဟုတ်အရေးပေါ်လုပ်သားလာကြလိမ့်မည်. သူတို့ကဆေးဘက်စစျဆေးသူပြောပြလိမ့်မယ်. ဆေးပညာစစျဆေးကိုခန္ဓာကိုယ်ကနေကြည့်နှင့်သိတယ်ဒါမှမဟုတ်လူတစ်ဦးသေဆုံးဘယ်လိုသက်သေပြသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်.
ဆေးပညာစစျဆေးသူသည်သေမင်း၏မှတ်ပုံတင်သည်သေခြင်းလက်မှတ်စတင်မည်. အသေခံလကျမှတျအနာဂတျမှာတစ်ပါတ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုယူပါလိမ့်မယ်. သငျသညျအသေခံလက်မှတ်မိတ္တူရရှိရန်အများအပြားအရာရှိများဟုမေးပါလိမ့်မည်. သငျသညျဖို့လိုပမေ 10 အသေခံလက်မှတ်မိတ္တူ.
သငျသညျသင်ျဂွိုဟျအဘို့ပြင်ဆင်ခံရဖို့အသုဘအိမ်ကအသေခန္ဓာကိုယ်ကိုသွားသင့်တယ်. အသုဘ၏အခန်းကဏ္ဍကိုသိပ်စျေးကြီးသည်. အကယ်. စီစဉ်ထားမီးသင်္ဂြိုဟ် (သငျသညျအားပေးပြီးမှပွာနှငျ့ကိုမီးရှို့) သင်တို့သည်အသုဘအိမ်မှာအဘို့အဆပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး. တစ်စုံတစ်ဦးကကွယ်လွန်သောအခါ, ခန္ဓာကိုယ်မီးလောင်တိုက်သွင်း၏အလောင်းများကိုဖို့ဆေးရုံကနေသို့မဟုတ်သင့်အိမ်ကမှတိုက်ရိုက်သွားနိုင်ပါတယ်.
သငျသညျတခုစျေးကြီးအစ်ကိုဝယ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး (Box ကိုသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံ). ရိုးရှင်းသောမီးသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းနှင့်သင်္ချိုင်းဘို့သင့်လျော်သောသစ်သားသေတ္တာများနှင့်ကတ်ထူပြားရှိပါတယ်. သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အသုဘအခမ်းအနားများပြုပါသို့မဟုတ်တစ်ဘာသာရေးဝန်ဆောင်မှုရှေးခယျြနိုငျ.
သင်သည်မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးဆောင်ခြင်းနှင့် cancel ဖို့လိုအပ်ကြောင်းဥပဒေကြမ်းများများစာရင်းကို Make (ထိုသို့သောဖုန်းကိုအဖြစ်) ဒါဟာအသုံးမနေသည်
သေမင်း၏ဖြစ်ပျက်မှုပြီးနောက်: စစ်ဆေးရမည့်စာရင်း (ဤသည်ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်မှပြောပြတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကိုယ်ပိုင်သင့်စာရင်းဖန်တီးကူညီပေးဖို့မဆိုပြည်နယ်အတွက်အသုံးဝင်သည်)
ဒီတစ်ခါလည်းသင်သည်အခြားနိုင်ငံများတွင်မိသားစုဝင်များရှိ. တစ်စုံတစ်ဦးကကွယ်လွန်သို့မဟုတ်အခြားတိုင်းပြည်အတွင်းသေဆုံးတဲ့အခါမှာ, သင်ယူနိုက်တက်စတိတ်ပြင်ပတွင်သွားလာချင်စေခြင်းငှါ. ဤသည်ကအရေးကြီးတယ်: ငါထွက်ခွာမတိုင်မီအရေးပေါ်အတွက်ခရီးသွားလာနှင့်ဆက်စပ်သောအန္တရာယ်များနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုနားလည်.
ဒါကြောင့်အမေရိကန်အကောက်ခွန်နှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး Service ကိုအဘယ်သို့မိန့်ကိုဖတ်ပါ (USCIS) အရေးပေါ်ခရီးသွားများအတွက်
သင်သည်မည်သည့်သံသယမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်သင်သွားမှီ, USCIS အတွက်တစ်စုံတစ်ဦးမှပြောဆို.
သင်လျော်သောစာရွက်စာတမ်းများမရှိဘဲပြန်လာရန်ခွင့်ပြုမပြုစေခြင်းငှါ. USCIS ခရီးသွားစာရွက်စာတမ်းများလေးအမျိုးအစားများကိုထုတ်ပေး:
ခရီးသွားစာရွက်စာတမ်းများနှင့် ပတ်သက်. USCIS သတင်းအချက်အလက်များ